O doro anya na anyị jiri aha baity mara mma iji dọta uche ụfọdụ, mana oge eruola onye bilie ma kwuo ya. Omenala SEO abughizi ihe oru kwesiri oru maka ulo oru itinye ego na ya. N'ezie - ndị mmadụ ka na-eji igwe nchọ ha achọ ihe… ma anyị ka na-ahụ na ndị ahịa anyị nọ na ntanetị siri ike, na-eweta ngwa ngwa nke na-eweta ọdịnaya ha nke ọma maka ndenye aha. Mana anyị anaghịzi eji usoro ochie nke ịnwa ịchọpụta otu ị ga-esi apịa mkpụrụ okwu ma ọ bụ iji nweta backlinks n'ụzọ ọ bụla dị mkpa.
Tags: njikọ azụisiokwu njupụtaisiokwu ojijiKeywordsọhụrụ seon'elu ikpo okwuChọọ Marketingseo anwuolaahịa mmadụnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yaọdịnala seo
Ọnye na -bụ Andrea Edwards?
Edward Chamberlain-Bell kwuru
Håkan Persson kwuru
Aha ya bụ Ruth Attwood